"Liverpool Ayaa Ka Fiican Kooxdii Arsenal Ee Guuldarro La'aanta Ku Qaaday Premier League" - Halyeey Arsenal Ah Oo Qirasho Lama Filaan Ah Sameeyay & Sharaxaad Uu Bixiyay | Laacib.net
“Liverpool Ayaa Ka Fiican Kooxdii Arsenal Ee Guuldarro La’aanta Ku Qaaday Premier League” – Halyeey Arsenal Ah Oo Qirasho Lama Filaan Ah Sameeyay & Sharaxaad Uu Bixiyay
March 25, 2020 Balaleti Comments Off on “Liverpool Ayaa Ka Fiican Kooxdii Arsenal Ee Guuldarro La’aanta Ku Qaaday Premier League” – Halyeey Arsenal Ah Oo Qirasho Lama Filaan Ah Sameeyay & Sharaxaad Uu Bixiyay
Kooxda Jurgen Klopp ee qarka u saaran inay hanato horyaalka Premier League ayaa ka fiican kooxdii Arsenal ee guuldarro la’aanta ku qaaday horyaalka xilli ciyaareedkii 2003-04, sida uu sheegay xiddigii hore ee khadka dhexe ee Arsenal Emmanuel Petit.
Ka dib 29 kulan oo la ciyaaray, kooxda heysata koobka Champions League ayaa 25 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka Premier League iyadoo laga badiyay kaliya hal kulan xilli ciyaareedkan.
Petit oo Arsenal u ciyaaray 116 kulan islamarkaana la qaaday koobka horyaalka iyo FA Cup sannadkii 1998 ayaa sheegay in kooxda Klopp ay wacdarro badan tahay kooxdii Gunners ee ku guuleysatay horyaalka 16 sannadood ka hor iyadoo aan laga badinin.
“Ixtiraam weyn ayaan u hayaa asxaabteydii hore ee Arsenal, laakiin marka aan eego Liverpool iyo waxa ay sameyneysay labadii sannadood ee ugu danbeysay….” ayuu Petit u sheegay Daily Mirror.
“Dadka hadda uun ayay eegayaan iyagana sababtoo ah sannadkii la soo dhaafay ayay Champions League ku guuleysteen laakiin xaqiiqda waxay tahay inay sidaan ahaayeen labadii ama seddexdii sannadood ee ugu danbeysay.
“Waa wax cajiib ah waxa ay sameynayaan – waa dhif iyo naadir in la arko koox badaneysa kulamada badan islamarkaana waqti walba ciyaarta ka heysata kooxaha ay ka horimaaneyso.
“Labada kooxoodba waa kuwa galaya taariikhda laakiin kooxdaan Liverpool ayaa aniga ila sii fiican. Waa ay adag tahay in la sharxo waxa aan dareemayo marka aan eego Liverpool, laakiin ma xusuusto inaan sidaan oo kale dareemayay markii aan eegayay kooxdii guuldarro la’aanta horyaalka ku qaaday ee Arsenal.
“Liverpool ayaa si weyn ii soo jiidatay marka loo eego kooxdii Arsenal ee horyaalka guuldarro la’aanta ku qaaday. Waan hubaa in taageerayaasha Arsenal aysan ku farxi doonin hadalkeyga. Laakiin waa inaan daacad u hadlo. Marka aan eego kooxdaan, dhiirogelintooda, xamaasadooda, ciyaartoyda badan ee tayada leh ee jooga, waxay ka duwan yihiin kooxaha kale oo dhan.”